इन्डियन ओपनमा नेपालको पदक पक्का – Khel Dainik
इन्डियन ओपनमा नेपालको पदक पक्का
माघ १५, २०७४ | (PostaComment)
काठमाडौं (खेलदैनिक) । भारतको नयाँ दिल्लीमा जारी इन्डियन ओपन अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगितामा नेपालकी विमला श्रेष्ठले कास्य पदक जितेकी छिन् । आइतबार राति वेन्टम ५४ केजीकी विमलाले क्वाटरफाइनलमा ताजिकिस्तानकी फार्डिया सामिएभालाई पराजित गर्दै कास्य पदक जितेकी हुन् ।
दिल्लीस्थित त्यागराज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी विमलाले ताजिकिस्तानकी फार्डियालाई आरएसिको आधारमा पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाउदै कास्य पक्का गरेकी हुन् । विमलाको यो पहिलो अन्तर्रा्ष्ट्रिय पदक समेत हो । विमलाले दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाललाई पदक दिलाएकी हुन् ।
प्रतियोगितामा नेपाललाई पहिलो पदक दिलाएपछि विमलाले स्वर्ण र रजत जित्ने लक्ष्य लिएको बताईन । यसअघि भियतनाम सहभागिता जनाएकी विमलाले भनिन् , “पहिलो अन्तर्रा्ष्ट्रिय पदक जितेको छु । एकदमै खुशी छु । अब अर्को चरणको खेलमा जित्ने लक्ष्यसहित रिङमा उत्रने छु ।”
अब विमलाले सेमिफाइनलमा मंगलबार भारतीय खेलाडी मनिषासँग खेल्ने छिन् । विमला नेपाल बक्सिङ संघले गत पुसमा भएको राखेप च्याम्पियनसिप अन्तर्गतको २७ औं पुरुष तथा आठौं महिला खुला बक्सिङ प्रतियोगितामा उत्कृष्ट फाइटर बनेकी थिइन् । विमलाको यो पदकसँगै नेपालको अन्तर्रा्ष्ट्रिय बक्सिङमा पदकको खडेरी अन्त्य भएको छ ।
नेपालले धेरै पछि ठुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेको मुख्य प्रशिक्षक प्रकास थापा मगरले जानकारी दिए । प्रशिक्षक मगरले भने, “बक्सिङको ठुला राष्ट्रले सहभागिता जनाएको प्रतियोगितामा विमलाले पदक जित्नु नेपालको लागि ऐतिहासिक हो । नेपालले बक्सिङमा धेरै पछि पदक जितेको छ ।” नेपालले भारतमा सम्पन्न १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा पदक जितेपछि यो पहिलो अन्तर्रा्ष्ट्रिय पदक जितेको प्रशिक्षक थापाले बताए ।
प्रतियोगितामा नेपाल र आयोजक भारतसहित २३ राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ । प्रतियोगिता अन्तर्गत नै पुरुषतर्फ नेपालका विष्णु प्रसाद घलेले क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएका छन् । वेल्टर ६९ केजीका बिष्णुले अफगानिस्तानका वासुद्दीन घाव्सीलाई अंकको आधारमा पराजित गरे ।
आर्मी क्लबकै विष्णुले वासुद्दीन घाव्सीलाई ३ – २ ले हराए । प्रतियोगिता अन्तर्गत नै आइतबार राति अन्य दुई महिला खेलाडी भने पराजित भएका छन् । महिला लाइट फ्लाइवेट ४८ केजी तौलकी ललिता महर्जन केन्याकी एन्जिभा भेरोनिका नबिथेसँग र लाइटवेट ६० केजीकी संगीता सुनार थाइल्याण्डकी पिमविलाई लावोपिमसँग अंकको आधारमामा पराजित भईन ।
← १६ औं आहा! रारा गोल्डकप: सशस्त्र प्रहरी बल र रुस्लान थ्री स्टार आज भिड्दै १६ औं आहा! रारा गोल्डकप: सशस्त्र प्रहरीलाई हराउँदै रुस्लान थ्री स्टार सेमिफाइनलमा →
भरत र नवयुग अमेरिका जाँदै माघ १५, २०७४
यू डायमन्डलाई महिला भलिबल उपाधि माघ १५, २०७४
महेन्द्र रत्नलाई भलिबल उपाधि माघ १५, २०७४
साफ यु–२० च्याम्पियनसिपमा नेपालका दुई रेफ्रीले पनि खेलाउने माघ १५, २०७४
टिवाईटी कप शुरु, पेनाङ र कारोको बराबरी माघ १५, २०७४
अक्सफोर्ड बन्यो क्रिमसन कप च्याम्पियन माघ १५, २०७४